DAAWO: Waa sidee xaalku marka kubad lagu ciyaaro meel aan cufis-jiidad lahayn sida hawada sare? (Cir-bixiyeenno wacdaro dhigay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Waa sidee xaalku marka kubad lagu ciyaaro meel aan cufis-jiidad lahayn...
DAAWO: Waa sidee xaalku marka kubad lagu ciyaaro meel aan cufis-jiidad lahayn sida hawada sare? (Cir-bixiyeenno wacdaro dhigay)
(Saldhigga ISS) 04 Juun 2018 – 3 Cir-bixiyeen oo caalami ah ayaa shalay dib ugusoo laabtay saldhigga uu Ruushku ku leeyahay Kazakhstan iyagoo saaran kaabsolka Soyuz.
Cir-bixiyeennadan oo kala ah Anton Shkaplerov oo Ruush ah, dhiggiisa NASA Scott D. Tingle oo u dhashay Maraykanka, iyo Norishige Kanai oo Japanese ah ayaa dhulka kusoo noqday kaddib markii ay soo dhameeyeen howl ay u jireen Saldhigga Caalamiga ah ee ISS.
Intii ay halkaa joogeenna dabcan marka laga soo tago shaqadooda waxay sidoo kale isla qaadanayeen waqti madadaalo, sid
— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 januari 2018
a iyagoo ciyaarayay kubadda cagta, Bedminton tuuranayay, in ay la kaftamaan madaxdooda, inay muusig garaacdaan ama xitaa salbayay xaaqin-danabeedka qashinka lagu nuugo.
Hoos ka daawo sida ay u sahlan tahay in kubad la ciyaaro marka aysan hawadu cufis-jiidad lahayn.
Waa Shkaplerov iyo Kanai spoke oo la kaftamaya madaxwaynayaasha Ruushka Vladimir Putin iyo Wasiirka 1-aad ee Japanese-ka Shinzo Abe oo ku sugan Kremlin-ka si ay ula wadaagaan nolosha saldhigga ISS.
Putin & Abe call ISS from Kremlin after Russia-Japan talks https://t.co/GjQEnkGi1G pic.twitter.com/wyy0PE4m0D
— RT (@RT_com) 26 maj 2018
— Scott D. Tingle (@Astro_Maker) 1 maj 2018
Previous articleMUQDISHO: Ciidamo wata dharka ciidamada dowladda oo xeelad cajiib ah dadka ku dhacaya (Arrin la yaab leh)
Next articleWefdi ka socda Norway iyo World Bank oo booqday Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya.